Ihe omumu omumu: Otu esi emeputa URL zuru oke maka SEO?
Ụlọ ọrụ ọchụchọ na-eji URLs bulie data niile ha na-ekpokọta gbasara otu ọdịnaya nke ọdịnaya.Ebumnobi nke URL nwere ike ime ka ọdịiche dị na ogo na-akwado njikwa njikwa search engine. Ha bụ ihe dị iche iche dị na aURL ebe ndị ọzọ adịghị.
The Senior Customer Success Manager nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Jack Miller, na-enye ndụmọdụ maka ịmepụta SEO gị na URL zuru oke.
Ndị na-enyocha Resource Uniform (URL) na-agwa ndị nchọgharị na sava ebe ịchọta ibe - kloxo ssl install.Njikọ ndị a dị n'usoro a na-ahụ maka mmadụ, ọrụ ha bụ ikpuchi adreesị IP dabere na nọmba ndị dị n'okpuru.
Ka a weere URL dịka enyi na enyi, ọ ghaghị ịnwe okwu dị iche na nchịkọta ogologonke akwụkwọ ozi na nọmba. Ha dị irè ebe ọ bụ na ha nọ na nchịkọta mmadụ na-enwe ike ịgụta ọnụ na ntakịrị isiokwu ndị na-egosi na ha na-agagharịiji nyochaa engines. N'ọtụtụ ọnọdụ, URL ndị e kere na-akpaghị aka site na ikpo okwu gị abụghị enyi. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ikpo okwuugbu a, na-enye gị ohere ime ka URLs enyi gị site n'ịgbanwe akwụkwọ edemede na nọmba nọ na saịtị nke saịtị site na iji aha nke ibe na ụzọ.
Tụlee ihe atụ abụọ nke URL.
N'agbanyeghi na URL nke abuo abughi mkpumkpu, onye puru igwa ihe nke omaonye ọrụ weebụ ga - enweta: peeji nke metụtara uwe mmadụ.
Ịmepụta URL kachasị mma
Ihe ndị a bụ ihe achọrọ nke kachasị URL maka SEO:
URL ga-adị mkpirikpi ma o nweghịzi okwu ma ọ bụ nchekwa.
Ọnụnọ nke mkpụrụedemede alphanumeric na obere ala. Iji obere ala na-ebelataihe ize ndụ nke mbiputegharị ọdịnaya.
Jiri hyphens wepụta okwu. A ghaghị izere ebe dị iche iche na ebe dị ichiiche kemgbe ọchụchọengines chebara echiche nke okwu ndị a kewara ekewa ka ha bụrụ okwu ogologo.
Na-etinye mkpuru okwu mgbe o kwere omume.
Jiri nsonaazụ ọchụchọ nweta ọkwa dị elu karị ma mee ka ahụmịhe onye ọrụ nwee nkwalite.
Google ga - ahọrọ ime ka ogo nke nyiwe echedoro na - akwado na protocol HTTPS.Nnyocha na-egosi na ihe karịrị pasent 50 nke nsonaazụ ọchụchọ na ibe sitere na saịtị na HTPPS.
Mgbanwe nke HTTP na HTTPS bụ mgbanwe URL, yana oke ọnya dị egwu.Google na-ele migration ahụ anya dịka ọmarịcha ebe ọ bụ na a na-ewere usoro nkwekọrịta. Otú ọ dị, a ghaghị itinye 301 ntụziaka iji mee mgbanwena ịrụ ọrụ dị mkpa ka a nyochaa iji kpughee nsogbu ndị nwere ike ime.
Hashtags na URL
Ọdịnaya nke nwere ike ịsị na ọ bụrụ na ọ bụ ya na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ otu URL maka yaotu akwukwo ọdịnaya. AJAX na-eme otu URL maka ọtụtụ peeji nke ọdịnaya, karịsịa na-efunahụ engines ọchụchọ dị icheaha akwukwọ na nke ha, ha nwere ike ijikọta ikike na ikike.
Mgbe iji mee ka URL
Oge zuru okè iji nweta URL dị iche iche na-agagharị na mwepụ. Dị ka teknụzụ ma ọ bụ saịtịmgbanwe nkà na ụzụ, ikpo okwu na-agbanwe agbanwe ma si otú ahụ, ọ bụ oge kachasị mma iji tinye ihe ndị chọrọ gbasara URL syntax na ọdịnaya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ekwesịrị ịmechapụ URL gị naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpaihe ndi ozo ma obu bugharia otutu iji zere ihe ize ndụ.